March 13, 2018 - Page2of9- नमस्ते खबर
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको विवादका कारण न्यापालिकानै विवादमा परेका बेला सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको पक्षमा उभिएको छ । सर्वोच्चमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुले अविलम्ब पूर्ण बैठक बसी समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । न्यायाधाशीहरुका कारण उत्पन्न समस्या समयमै समाधान नगरिए बेन्च बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशहरुको राजीनामा मागसहित आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियन आवद्ध विभागीय कार्य समितिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली न्यायालयको मानमर्दन तथा न्यायपालिकाको जनआस्था खस्कने कार्यमा न्यायाधीशनै संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा एमाले सम्वद्ध निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष धनराज…
विमान दुर्घटनामा बाच्न सफल दिनेशले भने: ओहो मेरो भाग्य ! पूनर्र-जन्म पाईयो
काठमाडौं । यूएस बंगलाको विमान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटना हुँदा धेरै जीवनले यो जगत त्याग्नु प¥यो । परिवारमा पीडाको पहाड खस्यो । अनि खुसी दैवले खोसेर लग्यो । तर, त्यहि दैवले कसैको जीवनमा पुनःजन्मको अध्याय पनि सुरु गरिदियो । विनिता हुमागाई । उमेर २७ वर्ष । काठमाडौंको शान्तिनगर बस्ने २ छोराकी आमा हुन् उनी । यतिबेला उनमा उत्साहको सीमा नै छैन । जीवनका धेरै ठूलो लडाई जिते जस्तो भएको छ । हुने नै भयो किनकी उनले यहि जीवनमा डुब्न लागेको घाम फेरि उदाएको जो देख्न पाएकी छिन् ।…
आपहरण गरि आफ्नै साथिको निर्मम हत्या, हत्यारा तिन जना पक्राउ
March 13, 2018 March 13, 2018 joes_limbu joes_limbu
आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै गृहमन्त्री यस्तो कडा निर्देशन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताले महसुस गर्नेगरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखलगायतका सरकारी पदाधिकारीलाई आज गृह मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल सडक जाम हटाउने कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिए। उनले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तीन महिना, छ महिना कति सयम लाग्छ सोहीअनुरुपको खाका बनाउन सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “विद्युत्भार कटौतीमुक्त नेपाल घोषणा गरिएजस्तै ट्राफिक जाममुक्त नेपाल घोषणा गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाउनुहोस् ।” गृहमन्त्री थापाले सडक, पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा भ्रष्टाचार…
युए बंगला विमान दुर्घटना हुदा ५१ जनाको ज्यान गुम्यो यो दर्दनाक घटनाको जिम्मा कस्ले लिने? घटनाको सत्य तथ्य वाहिरी आओस्
काठमाडौं, २९ फागुन– सोमवार दिउँसोको १ बजेर ४८ मिनेट जति भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाईमार्ग जी ३३६ (बाराको सिमरा)बाट एक जहाज नेपाल प्रवेश गरेको संकेत एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुममा देखिन्छ । त्यो जहाज युनाइटेड बंगलादेश एयरलाइन्स डीएच ८ डी (फ्लाइट नम्बर बीएस २११) थियो । १ बजेर ५४ मिनेटजति हुँदा ट्राफिक कन्ट्रोल र विमानको ककफिटबीच सम्वाद शुरु हुन्छ । एयर ट्राफिकसँग सम्वाद शुरु हुँदा विमान सिमराको आकाशबाट अगाडि बढेर काठमाडौंको आकाशमा पुगिसकेको थियो । सम्वाद शुरु भएको करिब ३ मिनेटपछि विमानका चालक (आबिद हसन)ले ल्याण्डिङका लागि विमानस्थलको अवस्थाबारे…
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाईको घर पुग्दा….
विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको भनिएका दिनेश हुमागाई घर पुग्दा परिवारजनमा हर्षको सीमा नै रहेन, पुर्नजन्म पाएको झै भएको भाग्यमानी दिनेशको कथन काठमाडौं । यूएस बंगलाको विमान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार दुर्घटना हुँदा धेरै जीवनले यो जगत त्याग्नु प¥यो । परिवारमा पीडाको पहाड खस्यो । अनि खुसी दैवले खोसेर लग्यो । तर, त्यहि दैवले कसैको जीवनमा पुनःजन्मको अध्याय पनि सुरु गरिदियो । विनिता हुमागाई । उमेर २७ वर्ष । काठमाडौंको शान्तिनगर बस्ने २ छोराकी आमा हुन् उनी । यतिबेला उनमा उत्साहको सीमा नै छैन । जीवनका धेरै ठूलो लडाई जिते…
अव पार्टीको लागि राजनिती नगर्ने विधि-विधान अन्तर्गत रहेर काम गर्ने: सभामुख महरा
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । झन्डै दुईतिहाइनजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको समर्थनमा उनी सभामुख पदमा पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार नउठाएर महरालाई नै सर्वसम्मत बन्ने बाटो खुला गरिदियो । यसै सन्दर्भमा सभामुखका रूपमा महराको आगामी कार्यकाल, उनले निर्वाह गर्ने भूमिका लगायत विषयमा गरिएकाे अन्तरवार्ता तपाईंसँग ०४८ सालदेखिको संसदीय अनुभव छ, जनयुद्ध हुँदै शान्तिप्रक्रियापछिको लोकतन्त्र प्राप्ति र संविधान जारीपछिको संघीय संसद्मा सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ? लामो समय त मैले राजनीतिक…
“सिधा कुरा जनतासँग भाग- १९६ ” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभमा भोलेबाबाको विशेष कुरा खुलासा गर्दै हेर्नुहोस्(LIVE News 24 TV)
अन्य समाचार पनि हेर्नुहोला विमान दुर्घटनाका घाइते भन्छन्, ‘नयाँ जीवन पाएँ’ [भिडियो] काठमाडौँ — हामी १२ जना ट्राभल एजेन्सीका पर्यटन व्यवसायी र यूएस बंगलाका २ जना प्रतिनिधिहरु बंगलादेशको कोक्स बजारमा हुन गइरहेको कस्टमर सक्सेस समिट भनेर ९ तारिखमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थियौं । यूएस बंगला एयरलाइन्सले नै आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले भाग लिन नेपालबाट अतिथिको रुपमा विजनेस पार्टनरको हिसाबले गएका थियौं। कोक्स बजारको कार्यक्रम सकेर सीधै फर्कने कार्यक्रम थियो। तर, हामी एक दिन बढी बस्यौं। ढाकाका ट्राभल एजेन्सीहरुलाई पनि भेट्नु पर्‍यो र पर्यटन प्रवर्द्धनका केही क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने…
सिधा कुरा जनतासँगको भाग 196 बारे जानकारी गराउँदै रवि लामिछाने फेसबुकमार्फत भोलेबाबाको विशेष कुरा खुलासा गर्दै
SIDHAKURA JANATASANGA LIVE from Kailali Posted by Rabi Lamichhane on Tuesday, March 13, 2018 अन्य समाचार पनि हेर्नुहोला चैतदेखि २० वर्ष पुराना गाडी हटाइने सरकारले आगामी चैत १ देखि मुलुकभर २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन नदिने भएको छ । पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै हटाउने निर्णय लिएको हो । गत वर्ष फागुनमै यस्ता गाडी हटाउने निर्णय भए पनि पूरै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । काठमाडौंबाट विस्थापित गाडी उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अब मुलुकभरिबाटै २० वर्ष पुराना गाडी हटाइने जनाएको छ । पहिलो चरणमा गाडी धनीलाई चेसिज, इन्जिन बुझाएर पुराना गाडी ‘पत्रु’ गर्न…
गृहमन्त्री थापाले दिए निर्देशन: जसरी हुन्छ नेपाललाई ट्राफिकजाम मुक्त देश बनाउनुहोस्
काठमाडौं, फागुन २९ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जनताले महसुस गर्नेगरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखलगायतका सरकारी पदाधिकारीलाई आज गृह मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काल सडक जाम हटाउने कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभयो । उहाँले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तीन महिना, छ महिना कति सयम लाग्छ सोहीअनुरुपको खाका बनाउन सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत्भार कटौतीमुक्त नेपाल घोषणा गरिएजस्तै ट्राफिक जाममुक्त नेपाल घोषणा गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाउनुहोस् ।”…